क्रिसमस मनाउँदा अनिवार्य मास्क लगाउन डब्लुएचओको आह्वान | ईमाउण्टेन समाचार
साउन १९ २०७८, मंगलबार
क्रिसमस मनाउँदा अनिवार्य मास्क लगाउन डब्लुएचओको आह्वान
पुष २, २०७७ पढ्न ३ मिनेट
एजेन्सी, २ पुष । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले क्रिसमस मनाउने क्रममा हुने भिडभाडका बेला अनिवार्य मास्क लगाउन सबैलाई आह्वान गरेको छ । युरोपमा क्रिसमस मनाउनेको संख्या धेरै भएकाले संगठनको युरोप कार्यालयले विशेष गरेर युरोप क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई मास्क लगाउन आह्वान गरेको हो ।
संगठनले बुधबार जारी गरेको अपिलमा भविष्यको पुनःउत्थानलाई ध्यान दिँदै नयाँ वर्ष सन् २०२१ मा कोरोना महामारीको न्यूनीकरण हुने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । विगतमा खुल्लारुपमा क्रिसमस मनाउन पाइएको भएपनि यस वर्षको क्रिसमस भने मास्क लगाएर मनाउन संगठनले विशेष जोड गरेको छ ।
क्रिसमस मनाउने क्रममा हेलचक्रयाइँ गरियो भने युरोपभरी नै कोरोनाभाइरसको महामारी फेरी अझ बढ्ने खतरा भएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । हरेक व्यक्ति व्यक्तिको सतर्कताले समुदायलाई सुरक्षित बनाउन सकिने भएकाले हरेकले सावधानी अपनाउनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ ।
सकेसम्म परिवार मात्रै सहभागी हुने गरी आफ्नै बासस्थानमा क्रिसमस मनाउन र बाहिर जानै परेमा मास्कको पूर्ण प्रयोग गर्न संगठनले पटकपटक अनुरोध गरेको छ ।
विश्व‐मा वर्गिकृतChristmas, CompulsaryMask, WHO
जर्मनीमा पुनः लकडाउन, स्कुल तथा अत्यावश्यक बाहेकका सबै व्यापार बन्द
डब्लुएचओको वैज्ञानिक टोली चीनको वुहान क्षेत्रमा जाने
सुजिता हत्या प्रकरण : हत्यामा आफ्नै बुवाको संलग्नता बुवा सहित थप तीनजना पक्राउ
म्यान्मारका सैन्य प्रमुख मिन आङ हलिङद्वारा आफैँलाई प्रधानमन्त्री घोषणा
अबैध लागू औषध कोकिन सहित ९ जनालाई पक्राउ
सशस्त्र प्रहरीद्धारा चोरीपैठारीको लत्ताकपडा बरामद
पर्सामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा गाँजा बरामद
सशस्त्र प्रहरीद्वारा फेवतालबाट दुई जनाको सकुशल उद्वार
१२ वर्ष भन्दा माथिका बालबालिकालाई मास्क अनिवार्य गर्न डब्ल्यूएचओको निर्देशन
भदौ ७, २०७७
सार्वजनिक स्थानमा मास्क लगाउन डब्लुएचओको सुझाव
बिरामी हुनुहुन्‍न ? मास्क नलाउनुस्
विद्यालयमा क्रिसमसलाई विशेष प्राथमिकता, सान्टाको ड्रेस अनिवार्य
पुष ८, २०७५
मास्क कसलाई आवश्यक ?
स्पेनमा अर्काेसातादेखि मास्क लगाउनु नपर्ने